Kobo Forma သည်ထူးခြားသောပုံသဏ္withာန်ရှိသော ereader ဖြစ်သည် eReaders အားလုံး
Kobo Forma သည်ထူးခြားသော "ပုံသဏ္withာန်" နှင့်ကောင်းမွန်သောစာဖတ်သူဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ereader နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလများတွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက်လများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အမေဇုံကြီးသည်ထိုထုံးစံကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်းပြိုင်ဘက်ကင်းမဲ့ဟန်မရှိချေ။ Kobo rakutenဖတ်ရှုသူများဈေးကွက်တွင် Amazon ၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်၊ မကြာသေးမီက Kobo Forma ဟုခေါ်သော eReader အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်.
FCC မှတ်ပုံတင်ခြင်းကြောင့် eReader အသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း Kobo Aura One2(သို့) Kobo Aura Two ဟုလူတိုင်းကယူဆကြသော်လည်းအမည်နှင့်၎င်း၏ပုံသဏ္changedာန်ပြောင်းလဲသွားသည်။ Kobo Forma အသစ်သည် eReader တစ်ခုဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောအမည်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ.
Kobo Forma ၏အသွင်အပြင်နှင့်ပုံသဏ္allာန်အားလုံးဖြစ်သည် အဆိုပါ Kindle အိုအေစစ်စာဖတ်ခြင်းသည်တစ်ဖက်၌ထားနိုင်ပြီးအိပ်ရာထဲတွင်စာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်စာဖတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
Kobo Forma သည်လက်တစ်ချောင်းဖတ်ရုံသာမကလက်ချောင်းအနည်းငယ်ထိဖြင့်စက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ နှင့်အခြားမော်ဒယ်များနှင့်မတူဘဲ, Kobo Forma သည်ဖန်သားပြင်လှန်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် pdf စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်နိုင်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
Kobo Forma သည် ၈ လက်မအရွယ် screen ကိုထိန်းသိမ်းထားသည် Carta HD နည်းပညာနှင့် Resolution 300 dpi။ Kobo Forma မှာ touchscreen အပြင် backlit display လည်းပါဝင်သည်။
Screen နှင့် device ၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများသည် Moebius နည်းပညာဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရုံသာမက၊ တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည် device ကို။ Kobo Forma သည်၎င်း၏အစ်ကိုများကဲ့သို့အိုင်ဖုန်းကိုရှုပ်ထွေးမှု၊ ခြစ်ရာများနှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသော IPX8 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်ဆက်လက်ရေတွက်ထားသည်။
ဤ ereader မော်ဒယ်သစ်သည် Kobo Aura One ထက်ပိုမိုပါးလွှာ။ ပေါ့ပါးသည် 197 ဂရမ်အလေးချိန်။ အသုံးပြုသူများစွာ၊ အိပ်ရာဝင်ချိန်စာဖတ်သူများကိုနာရီပေါင်းများစွာစာဖတ်နိုင်အောင်လုပ်သောအရာသည်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်အဆင်မပြေမှုဖြစ်စေသည်။
ဒီအသစ် Kobo eReader ၎င်းကိုလာမည့်အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်အထိစပိန်နိုင်ငံတွင်မ ၀ ယ်နိုင်ပါ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်မှကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်နိုင်သည်။ Kobo Forma ၏စျေးနှုန်းသည် ၂၇၉.၉၉ ယူရိုရှိပြီး Kindle Oasis ထက်ယူရို ၃၀ ပိုမိုစျေးကြီးသည်။ ပုံမှန် eReader နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းသည်တတ်နိုင်လောက်မှုမရှိပါ။ သို့သော် Kobo Forma သည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်နိမ့်ဆုံး eReader မဟုတ်သော်လည်းအဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားမှာမျှတမှုရှိသည်။
အခြားဖတ်ရှုသူများနှင့်မတူဘဲ Kobo Forma သည်ပွင့်လင်းသော ebook အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ မည်သည့်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်မဆို ebooks များကို ၀ ယ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အားစက်ပေါ်တွင်ဖတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Kobo နှင့် Fnac တို့သည်မကြာသေးမီကအတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစပိန်သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စပိန်ဘာသာဖြင့် ebooks ၁၃၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး၎င်းစာအုပ်များတွင် ebook ၁၅၀၀၀ အခမဲ့ရှိသည်။
မကြာမီကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိဤ Kobo ကိရိယာအသစ်ကိုဆန်းစစ်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း Kobo သည်အက်ကွဲရန်ပြိုင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေဆဲဟုအားလုံးကထင်နေပုံရသည်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Kobo » Kobo Forma သည်ထူးခြားသော "ပုံသဏ္withာန်" နှင့်ကောင်းမွန်သောစာဖတ်သူဖြစ်သည်။
ကြည့်ကောင်းပါတယ် ငါ Oasis2ကိုတစ်လကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါအများကြီးစာမဖတ်သောကြောင့်, ငါအခြေခံအားဖြင့်ပြန်လာ (ငါကအားသာချက်ကိုယူ။ , လာလာပါ, ငါအားနည်းတစ်နှစ်ဖတ်နေကြပြီ) နှင့်လည်းဘက်ထရီငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ပါတ်သာကြာသည်၊ စာအုပ်မဟုတ်ပါ။ ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာသော Paperwhite ထက်များစွာလျော့နည်းသည်။
နောက်တစ်ခုကလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကိုင်ရတာနည်းနည်းလေးလံနေပုံရတယ်၊ အဲဒါကိုချိတ်ဆွဲထားရမယ်၊ ခလုတ်တွေရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုတာကအကူအညီဖြစ်တယ်။
ဒီတစ်ခုမှာအကြီးဆုံးမျက်နှာပြင်ရှိပြီးနည်းနည်းပိုလေးတယ်။ ငါ conforlight အရာကိုနှစ်သက်တယ် (Amazon ကကူးယူဖို့အချိန်အများကြီးယူပြီး) ပြီးတော့ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရမယ်။
အရာတစ်ခု ... ငါထင်သည်ခလုတ်များ မှလွဲ၍ မျက်နှာပြင်သည်ထိတွေ့မှုရှိသလား။ ကောင်းပြီငါကသိသာသည်ဆိုပါစို့ပေမယ့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ထဲမှာမြင်ကြပြီမဟုတ်။
စျေးနှုန်းကမြင့်ပေမယ့်မတူညီတဲ့စာဖတ်သူကိုပါ။ ငါပိုစွမ်းရည်သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုလျှင်, ကြိုက်တယ်လိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ ... ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်စိတ်မရှည်ဘူး။ Joaquín🙂
စျေးနှုန်းကဘာလဲ၊ မင်းအဲဒီအကြောင်းပြောပြီးမင်းမပြောပါဘူး ...
စျေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ အဲဒါဟာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အချက်အလက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့တာပါ။ ငါသိသလောက် Kobo Forma မှာ touch screen ရှိပြီးမျက်နှာပြင်ကိုမထိဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝနှောင့်နှေးလိမ့်မယ်။
Kindle Oasis အကြောင်းပြောတာကအံ့သြစရာပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်ထရီကတိုတာမခံပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းသင့်မှာချွတ်ယွင်းနေတဲ့ယူနစ်တစ်ခုရှိနိုင်တယ်။
Joaquínတစ်ခုကတော့၊ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာဒီမော်ဒယ်လ်ယူနစ်တစ်ခုယူတော့မယ်ဆိုလျှင်အဘိဓာန်ခေါင်းစဉ်ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါသလား။ ပြီးတော့ Amazon မှာဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကို Kobo မှာဖတ်လို့ရလား။
မင်္ဂလာပါ Javi၊ အဘိဓာန်တွေအကြောင်းမင်းဘာသိချင်လဲ။ Amazon တွင်သင်ဝယ်ယူသော ebook များအကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုက်ရိုက်မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်သင် Caliber မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကတော့ Amazon ကသူတို့ရဲ့ ebooks တွေကိုသူတို့ရဲ့ format နဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးလို့ပဲ။ ကျန်တဲ့ eReaders တွေကတော့သူတို့မထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ သို့သော် Caliber ၏ကျေးဇူးကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိပါ။
အဘိဓာန်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတို့တွင်ထည့်သွင်းထားလျှင်ဆိုလိုသည်။ စပိန်လူမျိုးလား စပိန်အင်္ဂလိပ်လား
Amazon စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသူတို့ကို Amazon ကနေ ereader ဆီတိုက်ရိုက်ပို့လို့ရလားဆိုတာကိုငါရည်ညွှန်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေပြီးပြီ။ မသိရပါဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည်။ Kobo Forma အတွက်မူ၎င်းတို့သည် 8 GB သာသုံးနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရွယ်အစားကလေ့လာမှုကို pdf နှင့်ရုပ်ပြများနှင့်အသုံးပြုရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ 32 GB ဗားရှင်းဂျပန်များသည် manga ကိုနှစ်သက်သူများဖြစ်သောကြောင့် Audiobooks အတွက် option တစ်ခုပါ ၀ င်သော 32 GB version သည်ဤဖတ်ရှုသူသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပိုက်ဆံဖြုန်းသင့်သည်။
ငါခရစ်စမတ်ကတည်းက kobo Forma ရှိတယ်၊ ဖတ်ရတာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေအများကြီး၊ သင့်မျက်လုံးတွေအတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမယ့်အမျိုးအစားတွေ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်ပုံနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သောလက်၏အမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်ဖတ်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည့်နေရာသည်၎င်းကိုသူအခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ၊ on-off-rest ခလုတ်သည်သေးငယ်ပြီး ၀ င်ရောက်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဘေးတိုက်တွင်သင်မတွေ့နိုင်သည့်အချိန်များရှိသည်။ သင်တွေ့နိုင်သည်ထက်အနည်းငယ်ပိုနှိပ်လျှင်၎င်းကိုသင်တွေ့မြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ စာဖတ်သူကိုအနားယူခွင့်ပေးမည့်အစားသင်ပိတ်ထားသည်။ သူတို့ကဒီစျေးနှုန်းနှင့်အတူဤရှုထောင့်, တိုးတက်စေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Kobo Forma ပြန်လည်သုံးသပ်
2017 "Kindle အိုအေစစ်7ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း